Indlovukazi isithi khumu emculweni
NOKUBONGWA PHENYANE | August 22, 2019
INDLOVUKAZI emculweni wokholo, uRebecca Malope, ithi ayifuni ukufela esteji njengoba into eyayibona kuMirriam Makeba yamenza wavuleka amehlo.
Ukusho lokhu esithangamini sabezindaba ebesisehhotela iLa Vita, eThekwini, ngoLwesibili ebusuku.
Kulo mcimbi ubezomemezela izindaba zokushiya kwakhe emculweni nokuthi i-albhamu yakhe yesi-36 iqukethe ini.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMirriam Makeba washonela phesheya kwezilwandle e-Italy, eCastel Volturno, ngo-2008 emuva kokuwa esteji.
“Ngisebenze kakhulu kule ndima futhi konke kube kuhle njengoba abantu bangamukela ngezandla ezimhlophe, bangixhasa.
“Ngahlangana nabantu ababefuna ukukhulisa ithalente lami, abangadlala ngami. Ngibona sekuyisikhathi sokuthi ngibeke phansi umbhobho ukuze ngihlale ngiphumule emzini wami nezingane zami,” kusho uRebecca oneminyaka engaphezulu kwengu-30 esendimeni yomculo.
Uthe i-albhamu yakhe yokugcina izophuma ngenyanga ezayo futhi iqukethe izingoma zokubonga.
“Ngiyathemba abantu bazoyithakasela. Njengoba sengizohlala nje lokho akusho ukuthi uma abaculi bokholo becela ukuthi ngibe ingxenye yezingoma zabo sengizonqaba, ngizozwakala ngibasize la kudingeka khona. Nginane-studio sami manje engisebenza kusona engihlose ukusiza intsha efuna ukuqopha umculo wayo onomlayezo.”
Uphinde wakugcizelela ukuthi ngeke esayenza enye i-albhamu kodwa uma kukhona ingoma eqhamukayo uyoyiqopha ayikhiphe.
“Ingoma ke yona ngiyoyiqopha ngeke ngiqambe amanga uma kuziwa kulokho, kodwa i-albhamu, hhayi ngifinyelele ekugcineni.”
Endimeni yomculo, uthe akakaze abe nengxabano eshisa phansi namuntu kodwa ngoba bekusetshenzwa ubephinde abe nokungaboni ngaso linye nabantu abahlukene. URebecca, ngonyaka odlule emcimbini amaDStv Mzansi Viewers Choice Awards (DStvMVCA), wahlonishwa ngegalelo lakhe emculweni.
Useke wahlonishwa nakweminye imicimbi emikhulu kuleli.